ဘဝနှငျ့အခဈြကဏ်ဍ Archives - MM Live News
မိဘနှဈပါးရဲ့ရငျခှငျမှာ လုံခွုံစှာနထေိုငျရငျး ကလေးဘဝကိုအပူပငျကငျးကငျးနဲ့ ဖွတျသနျးခှငျ့မရရှာတဲ့သူတို့လေးတှေ
February 22, 2020 MM Live News
မိဘနှစ်ပါးရဲ့ရင်ခွင်မှာ လုံခြုံစွာနေထိုင်ရင်း ကလေးဘဝကိုအပူပင်ကင်းကင်းနဲ့ ဖြတ်သန်းခွင့်မရရှာတဲ့သူတို့လေးတွေ ဒီအရွယ်ဆိုတာ မိဘနှစ်ပါးရဲ့ ရင်ခွင်ထဲမှာ လုံလုံခြုံခြုံနေထိုင်ရင်း ကလေးဘဝကိုအပူပင်ကင်းကင်းနဲ့ ဆော့ကစားရင်း ဖြတ်ကျော်နေရမယ့် အရွယ်ပါအခုလိုမျိုး သီလရှင် ကလေးလေးတွေ၊ ကိုရင် ကလေးလေးတွေကို မြင်တိုင်း ရင်ထဲမှာ အတိုင်းအဆမရှိ ဆို့နင့်မိပါတယ်။ အရွယ်လေးတွေနဲ့ မလိုက်အောင်မနက်အစောကြီးမှာ ဆွမ်းခံထွက်ကြရတယ်။ တစ်ချို့ဆိုရင် အဝေးကြီးကနေ ကားတွေအဆင့်ဆင်းစီးပြီး လာခဲ့ကြရပါသတဲ့။ စာသင်ကျောင်းတွေရှေ့ရောက်ရင် အရွယ်တူ ကလေးလေးတွေ ကျောင်းဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ ကျောင်းဝင်းထဲ ပြေးလွှားဆော့ကစားနေကြတာကို အပြင်ဘက်ကနေ ငေးမောပြီး ကြည့်နေတတ်တာလည်း မြင်ဖူးပါရဲ့။ သူတို့လေးတွေရဲ့ ဘဝနောက်ကြောင်းဟာ မသာယာလှဘူးဆိုတာ မေးဖို့မလိုအောင် ထင်ရှားပါတယ်၊ တော်ပါသေးရဲ့ သာသနာ့ဘောင်ရဲ့ စောင့်ရှောက်မှု အရိပ်အောက်မှာ ခိုလှုံခွင့်ရသေးလို့ဆိုပြီး စိတ်ဖြေရပါတယ်၊ စောင့်ရှောက်လက်ခံထားတဲ့ ကျောင်းတွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ သားသနာ့ဘောင်မှာဆိုတော့လည်း စည်းကမ်း ဝိနည်းတော်တွေနဲ့အညီ ထိန်းသိမ်း […]
အတ်တကွောငျ့ ကွှလှေငျ့ခဲ့သော ပနျးလေးတဈပှငျ့ …!
February 10, 2020 MM Live News
အတ္တကြောင့် ကြွေလွင့်ခဲ့သော ပန်းလေးတစ်ပွင့် …! ” ဆရာမ သမီး မခိုးပါဘူး ” ” သမီး မခိုးရင် ဒီစာအုပ်က ဘယ်လိုလုပ် သမီး လွယ်အိတ်ထဲ ရောက်နေတာလဲ ” ” ဒါတော့သမီးလည်း မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီစာအုပ်ကို တစ်ကယ် မခိုးခဲ့ပါဘူးရှင့် ။ ဘုရားပေးပေး ကျမ်းပေးပေးပါ ဆရာမရယ် သမီး မခိုးခဲ့ပါဘူး..ဟီး … ဟီး ,.. ဟီး ” “ခုမှ ငိုပြ မနေနဲ့တော့။ အခုက လက်ပူးလက်ကြပ် သက်သေနဲ့တစ်ကွ မိတာ။ ရှင်းပြချက်ပေးချင်ရင် မနက်ဖြန် သမီးရဲ့ အုပ်ထိန်းသူခေါ်ပြီး ကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးပြောပေါ့ ။ ခုတော့ ဆရာမ စာသင်တော့မယ် ။ စာအုပ်ပိုင်ရှင်လည်း ပျောက်တဲ့ […]
အှနျလိုငျးပျေါမှာ…မွနျမာစုံတှဲ ကိုယျတိုငျရိုကျတှေ တနကေို့ ၁၀ကားလောကျ နစေ့ဉျမွငျတှနေ့ရေတယျ…
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ…မြန်မာစုံတွဲ…ချောင်းရိုက်တွေ…ကိုယ်တိုင်ရိုက်တွေ တနေ့ကို…၁၀ကားလောက်..နေ့စဉ် မြင်တွေ့နေရတယ်၊အဲဒီကာယကံရှင် တွေရဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်..အဲဒီကားတွေ မြင်တွေ့နေကြရမှာပါ။ တချိန်မှာ…ငါ့အဖေတွေ…ငါ့အမေတွေဆိုပြီး…သူတို့သားသမီးတွေလည်းမြင်နေကြ ရမှာဆိုတော့တွေးကြည့်ရင်….ပြသာနာအကြီးကြီးတွေပါ။မသိနားမလည်တဲ့ ညီမလေးများအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ မြင်ရတွေ့ရတာတွေ စိတ်မကောင်းစရာတွေမို့ပါ။ တစ်နေ့တစ်နေ့ ချက်ဘောက်ရီကွက်စ်ထဲမှာ လာအကြံဉာဏ်တောင်းကြတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျအများစုမှာ တူညီတဲ့အကြောင်းတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ချစ်သူနဲ့ အတူနေ နယ်ကျွံကြတဲ့အခါ မှတ်တမ်းတင်ခံရတဲ့ ကိစ္စတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ ဆိုတာပါပဲ။ အချို့ဆို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဒီလူကို ဆက်လက်တွဲဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့တာတောင်မှ ဒီလိုRecordတွေ ပေါက်ကြားမှာစိုးရိမ်လို့ ကြိတ်မှိတ်ရှေ့ဆက်နေရတာတွေ၊ အချို့ဆိုရင် လုံးဝပြတ်သွားပြီး သူ့စော်နဲ့သူ၊ ကိုယ့်ဘဲနဲ့ကိုယ် ဖြစ်နေတာတောင်မှ လှမ်းခေါ်ရင် သွားအိပ်ပေးရတဲ့ အခမဲ့ပြည့်တန်ဆာဘဝကို ရောက်မှန်းမသိ ရောက်နေရတဲ့ ရင်နာစရာ ဖြစ်ရပ်တွေ တကယ်ကြီးကို ရှိနေတာပါ။ အခုနောက်ပိုင်း အင်တာနက်မှာ မကြာခဏ Sex Tape တွေ ပျံ့နှံ့ကြပါတယ်။ လူသိများသူတွေရဲ့ ကိစ္စဆို […]
အပြို စဈစဈ မြားသာ ဖတျရနျ…အအိုတှဖေတျမိရငျ စိတျဓါတျကမြှာစိုးလို့ပါ….
February 9, 2020 MM Live News
အပျို စစ်စစ် များသာ ဖတ်ရန် ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး တမျိုး မထင်ပါနဲ့ နော်….အအိုတွေဖတ်မိရင် စိတ်ဓါတ်ကျမှာစိုးလို့ ပါ…. အပျိုစစ်စစ်ဆိုတာက ခုခေတ်က ၁၆ နှစ်၁၇နှစ်ဆိုရင်ကို ရည်းစားက ရှိနေကြတာ ။ ရည်းစားဖြစ်တာ ၁ ရက်မကြားဘူး living together က နေနေကြပြီလေ… တကယ်တော့ လက်မထပ်ရသေးပဲနဲ့ အတူတူနေကြတာ မိန်းခလေးတစ်ယောက်အတွက် လုံးဝတန်ဖိုးကျသွားပါပြီ….. အပျိုစင် ဘဝဆိုတာ ယောင်္ကျားတိုင်းရဲ့တန်ဖိုးထားခြင်းကို ခံထားရသူလို့ တောင် တင်စားထားကြပါတယ်…. အပျိုစင်ကနေ အအို ဖြစ်ဖို့ က ၅မိနစ်မကြာပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် အအိုကနေ အပျို ပြန်ဖြစ်ဖို့ က ရှိသမျှ စည်းစိမ်း ပုံပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ ဘဝအတွက်ပြန်မရနိုင်တော့ပါဘူး…. ချစ်သူရှိခဲ့ရင်လည်း ဒီအပျိုစင်ဘဝကို […]
အခမဲ့ရမဲ့ ပွညျ့တနျဆာတှသေိရအောငျ ဖတျထားနျော…
February 2, 2020 MM Live News
တရားဝင် လက်မထပ်ရသေးပဲနဲ့ Living together နေတဲ့ မိန်းခလေးတွေဟာ တကယ်တော့ အခမဲ့ ပြည့်တန်ဆာတွေပါ။ သူတို့တွေဟာ ပိုက်ဆံပေးစရာမလို ပဲ အခမဲ့ အလကား ရတဲ့အမျိုးပေါ့။ သူတို့အတွက်လိုတာက ဟန်ဆောင်မှုတွေပါတဲ့ ချစ်တယ် ဆိုတဲ့ စကားလေးတခွန်းပါပဲ။ ဒီဘက်ခေတ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အပျိုစင်ဘဝကို တန်ဖိုးမထားတဲ့ မိန်းခလေးတွေ တနေ့တခြား တိုးပွားလာတာက ဝမ်းနည်းစရာပါ။ ချစ်တယ်ဆို တဲ့စကားလေးတခွန်း နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကြီးလွန်းတဲ့ အပျိုစင်ဘဝကို ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက် မဟုတ်သေးတဲ့ တစိမ်း ယောကျာ်းတယောက်ကို အလဟတ်သတ် လွယ်လွယ်နဲ့ အလကား ပေးလိုက်ရတာ တွေးတတ်ရင် တကယ်တော့ ရင်နာစရာပါ။ ကိုယ်က ကိုယ့်ချစ်သူကောင်လေးနဲ့ Living together နေလိုက်လို့ သူ့က ကိုယ့်ကိုယူမှာ သေခြာရဲ့လား?သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ကရော မပြတ်ကြတော့ဘူးလား? သူ […]
အရာရာအားလုံးထကျ အိပျရာပျေါက ကိစ်စကိုသာ ပိုစိတျဝငျစားကွတဲ့ အိပျရာပျေါက လူတနျးစား
December 20, 2019 MM Live
လိင် အဆင့်ကတက်မလာတဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်… ” အိပ်ရာပေါ်က လူတန်းစားများ ” အရာရာအားလုံးထက် အိပ်ရာပေါ်က ကိစ္စကိုသာ ပိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့နိုင်ငံမှာ ကျွန်တော်တို့နေကြတယ်… မုဆိုးမတစ်ယောက်.. လင်သားသေသွားပါပြီ…အရွယ်လည်းကောင်းတုန်းပါ… သူ့ဘဝ သူ့မိဘဘဝ သူ့ကလေးတွေဘဝ သူဘယ်လိုရုန်းကန်မလဲ…ဘယ်လိုရှေ့ဆက်မှာလဲ … သူဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ ဆိုတာထက်.. သူဘယ်သူနဲ့ထပ်အိပ်မလဲ… သူဘယ်လိုအိပ်မလဲဆိုတာကိုသာ ပိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျွန်တော်တို့နေတယ်။ Single mother တစ်ယောက်…လိုချင်လို့ဘဲရရ…မလိုချင်ဘဲရရ… ရလာတဲ့ကလေးတစ်ယောက်နဲ့သူမအနာဂတ်ကိုဘယ်လိုဆက်ပြီး ပုံဖော်မလဲဆိုတာထက်… ဘယ်သူနဲ့အိပ်ခဲ့တာလဲ…ခုဘယ်သူနဲ့အိပ်နေတာလဲ…. နောက်ဘယ်သူနဲ့ထပ်အိပ်ဦးမှာလဲဆိုတာကိုဘဲ သိချင်နေကြတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းထဲမှာကျွန်တော်တို့နေကြတယ်။ ပြည့်တန်ဆာတစ်ယောက်..အလုပ်ကိုက လူတွေနဲ့လိုက်အိပ်မှပိုက်ဆံရမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ရတာပါ… ရလာတဲ့ငွေကြေးနဲ့သူ့ဘဝ သူ့မိသားစုဘဝ သူ့အနာဂတ်အတွက် သူဖန်တီးတည်ဆောက်ရပါတယ်… ငွေပေးမယ့်သူက အိပ်ဖို့ခေါ်တာမဆန်းပေမယ့်ငွေလည်းမပေးဘဲ…ဘာမှမကူညီကြဘဲ…. ဘယ်သွားအိပ်တာလဲ…ဘယ်လောက်ရလို့ အိပ်တာလဲ…. ဘယ်သူနဲ့အိပ်တာလဲကိုသာစပ်စုကြတဲ့အလွန်သန့်ရှင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ရှင်သန်နေကြတယ်။ အပျိုကြီး လူပျိုကြီးတွေ FA တွေ…သူ့ဘဝရဲ့ သမိုင်းတွေ….သူ့ဘဝရဲ့ စိတ်ကူးတွေ…. သူ့ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေထက်ဘယ်သူနဲ့အိပ်ခဲ့တာလဲ…တိတ်တိတ်ပုန်း အိပ်မယ့်သူရှိနေတာလား….. အိပ်ဖို့လူမရှာတော့ဘူးလား […]
အမြိုးသမီးမြား သတိထားနိုငျဖို့ ကိုယျတိုငျကွုံခဲ့သူတှရေဲ့ ဖွဈရပျမှနျ…
December 16, 2019 MM Live
အမျိုးသမီးများ သတိထားနိုင်ဖို့ ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့သူတွေရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်… ကျွန်မက ပိုင်းလုံးတွေအကြောင်းရေးတော့ အမျိုးသမီးတချို့က ရယ်စရာလို သဘောထားပြီး ကွန်မန့်လာပေးကြတယ်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိတယ်ထင်ရင် ကျွန်မဝမ်းသာရမှာပါ ။ ဟိုးတလောက ဆရာဝန်မလေးတယောက် ဒူဘိုင်းက မြန်မာတယောက်နဲ့ ငြိပါတယ်။ ဟိုက ဘယ်လောက်အပြောကောင်းတယ်မသိဘူး။ ဆရာဝန်မလေးက အိုင်ဖုန်းတလုံးဝယ်ပေးလိုက်တယ်။ အပြင်မှာ မတွေ့ဖူးဘူးနော်။ ရသမျှ ချူနေရင်း ကြာတော့ မူမမှန်တာ သိလာတယ်။ နောက်တော့ဆရာဝန်မလေးက live လွှင့်ပြီး အကြောင်းစုံဖွင့်ချလို့ အဲဒီကောင်အကြောင်း ဗူးပေါ်သလ်ို ပေါ်လာမှ ဖုန်းဖိုးငွေတွေ ပြန်ပေးပါတယ်။ အဲဒီကောင်ဟာ ကျွန်မအကောင့်မှာပါ လာအက်ထားတာ တွေ့ရတယ်။နောက်တခါ ညီမလေးတယောက် သူ့ ကိုယ်တွေ့ အဖြစ်အပျက်ကို ကျွန်မကို ဝန်ခံရင်း ရင်ဖွင့်ပါတယ်။ အဲဒီညီမလေးက ဖြူဖြူချောချောလေးပါ။ အသက်ကလည်း (၂၅) […]
တိတျတိတျလေး ပေးဆပျရတာကိုပဲ ကနြေပျပါတယျ” ဆိုသူလေးက ပေးတဲ့ ဒုက်ခတှေ…
အသကျ၄၅ လောကျ ကလေး၃ယောကျအဖဟောရှယျတူ သူ့မျိနျးမကို အသကျကွီးပွီငွီးငှေ့ ပွီဆိုပွီး ကောငျမလေးငယျငယျရှာပါတယျ။ ထုံးစံအတိုငျး FB ကနအေသကျ၂၂နှဈ အခြောစားမိနျးကလေးတဈယောကျနဲ့ခြိတျမိပါတယျ ။ အပြျောရှာခငျြပမေဲ့…အပွဈပွောစရာမရှိတဲ့ကလေးတှေ အမေ ကိုလညျးမကှဲခငျြတဲ့ ဒီလူ့အတှကျ ပိုအဆငျပွစေတောကကောငျမလေးကလညျး “အိမျထောငျရှိတာလညျးသိဒီအိမျထောငျကိုလညျး ဖကျြစီးလိုတဲ့ စိတျမရှိ ။တိတျတဆိတျ ခဈြနေ ပေးဆပျနရေရငျကနြေပျပါသတဲ့ အရမျးခဈြလို့ပါ”တဲ့ ။ တဈလကို ငှေ၁သိနျးလောကျပေးကမျးထောကျပံ့ရတာကလညျးဒျေါလာစား ဒီလူ့အတှကျတော့ အေးဆေးပါပဲ ။သူ ကံကောငျးလှနျးလို့သူနဲ့မှ အနဈနာခံပေးဆပျခငျြသူခဈြသူခြောခြောသနျ့သနျ့လေးကိုရတာပါဆိုပဲ ။ အဲဒီလိုနဲ့ ၁ပတျ ၁ရကျလောကျ ကောငျမလေးနဲ့သှားနပေုံမပကျြ မိနျးမနဲ့လညျးပေါငျးသငျးပြျောပြျောကွီးနလောလိုကျတဲ့ တဈနှဈလောကျအတှငျးမှာပဲမိနျးမ က ခဏခဏဖြား နမေကောငျးတရှောငျရှောငျတှဖွေဈလာပါရော။ သှေးစဈလိုကျတော့ HIV တဲ့အပွငျအလုပျလညျးမလုပျ ၊ကလေးကြောငျးအသိုငျးဝိုငျး အိမျမှုကိစ်စနဲ့ ယောကျြားအိပျယာကလှဲလို့ ဘယျမှမရောကျတဲ့ မိနျးမဘယျလိုဒီရောဂါ ရပါသလဲ ?။ မိနျးမဖွဈသူဟာ သနားစရာကောငျးလှစှာစိတျဓာတျတှေ ခြှတျခြုံကပြွီး၁လလောကျအတှငျး […]